Sheekh Shaakirow Saddex arrin waa u shar Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Sheekh Shaakirow Saddex arrin waa u shar Galmudug
Saddex arrimood, oo sii murjin kara xaaladda Galmudug, isla-markaana uu u tafaxeytay hirgalinooda Sheekh Shaakir, ayaa looga digay, waxaana loogu baaqay in uusan dagaal, hormar la’aan iyo burbur maamul hormuud u noqon.
Guriceel, Soomaaliya - In ka badan labaatan bilood oo siyaasadda Galmudug ay ahayd sariir-yaal sakaraadsan, waxaa labo isbuuc ka hor dib u soo laba-kacleeyay koox diimeedka Ahlu-sunna (ASWJ) oo in ka badan 10 sano, hore u xukumeysay magaalooyinka Dhusamareeb, Guriceel iyo Matabaan, ka hor inta aan saaxada siyaasadda laga saarin billowgii 2020.
Macalin Maxamuud Xasan Faarax, ayaa ah Guddoomiyaha Ahlu-sunna, hayeeshee, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ayaa hadda hoggaan u ah kooxda hubeysan ee billowgii bishaan la wareegtay Gureecl, labada wadaadba, waxa ay ka soo jeedaan degaanka, waxa ay ku leeyihiin taageerayaal badan, kuwaas oo sida hadda muuqata ay u qorsheeyeen in ay dabka ku shubaan.
Hadaba, Guuleed Faarax, oo si weyn ugu dhuun-duleela dhamaca Culumadaan iyo u jeedkooda siyaasadeed, ayaa qalinka u qaadatay in uu Sheekh Shaakir xasuusiso, Saddex arrimood oo shar ku ah degaanka uu ka soo jeedo, iyo guud ahaan degaannada Dowlad goboleedka Galmudug.
Arrinta 1-aad – (Dagaal), Sharta ugu horreysa ee Sheekh Shaakir uu doortay, isaga oo og faa’iido-darrada uu adduunyo iyo aakhiraba leeyahay, waa dagaal iyo dirir uu la galo Maamulka Galmudug iyo Dowladda Federaalka, si uu dib gacantiisa ugu soo celiyo degaanno ay ku jirto Dhuusamareeb, Xarunta Dowlad Goboleedka.
Sheekh Maxamed Shaakir, oo ah caalim cilmiga yaqaan, culumo badanna ka qalin daaratay, wuxuu u muuqdaa inuu noqday kutubo-xoor u tafa-xeydan daadinta dhiigga dad Muslim ah, maadaama uu duullaan ku soo qaaday Guriceel, hadana uu diyaar u yahay inuu ka dab-kiciyo Dhuusamareeb, dagaallada uu qosheeyay inuu ku qabsado degaannadaas, dhiigga ku daadanaya labada dhinacba, soo maalinta Qiyaamaha su’aal kuma laha?.
Dadka dagaallamaya ee dhiigoodu daadanayo, degaanka burburaya iyo maatada qaxeysa intuba, soo dadkiisa maaha? Halkay naxariistii bani-aadannimdu aadday? Dagaal sidiisaba natiijadiisa lama sii oga, waxaana ka imaan kara wax aadan hore u filan, ee Shaakirow, halkaas dagaalka ku ekey, dadkaada ha leyn degaankaadana ha burburin.
Arrinta 2-aad – (Dib u dhac) Kooxda uu Shaakir hoggaamiyo, waxa ay ku suntan yihiin, hor-mar la’aan, waana sababta Guriceel iyo Dhuusamareeb, dib u dhigtay, kana reebtay degaannada asaagood ah ee gobolka, maadaama ay muddo 10 sano ka badan ka arriminayeen magaalooyinkaas.
Hadda, waxaa jira iftiin dowladnimo iyo hormar bulsho haba-yaraadee, Caasimaduna waxa ay isu diyaarineysaa martigalinta doorashada Golaha Shacabka, ee Shaakirow dadka iyo degaanka dib ha u celin, waa shar weyn in dib loogu laabto mugdigii 10-kii sano ee la soo dhaafay aad galisay degaannada.
Arrinta 3-aad – (Burbur) Dagaal ka dhaca Dhuusamareeb, wuxuu sababi doonaa kala haad maamul iyo in Hay’adaha DGG, u guuraan magaalooyin kale, taas oo keeneysa in Dowladu aysan ku shaqeyn xarunteeda 1-aad, ASWJ, waxa ay ahayd carqaladdii ugu weyneed ee waligeed ku horgudbaneyd Galmudug, Shaakirow burbur maamul ha horseedin.
Kooxdaan oo si weyn ugu daaban, Garowe, waxaa macquul ah in loo adeejiyay burburinta Galmudug, waana muuqataan in ay horraanba noqdeen caqabad mutaxan oo aan meel laga maro lahayn.
Guuleed Faarax- KEYDMEDIA ONLINE